लागूऔषध ओसारपसारको लागि काँकडभिट्टा नाका ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै, प्रहरीको प्रयास असफल (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
लागूऔषध ओसारपसारको लागि काँकडभिट्टा नाका ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै, प्रहरीको प्रयास असफल (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Mar 21, 2020
काठमाडौं, ०८ चैत ।
१. लागूऔषध ओसारपसारको लागि काँकडभिट्टा नाका ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै, प्रहरीको प्रयास असफल
लागू पदार्थको ओसारपसारका लागि उर्वर नाका बन्दैछ पूर्वको काकड्भिट्टा । लागू औषध प्रयोगकर्ताको हिसाबमा पनि काठमाडौं पछि दोस्रो स्थान लिन थालेको छ झापाले ।
यही काकड्भिट्टा नाकाबाट छिरेका लागू औषधहरु पोखरा, काठमाडौं हुँदै देशका विभिन्न स्थानहरुमा पुग्ने गरेका छन् । मुलुकका लागि नै ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको काकड्भिट्टाबाट भइरहेको लागू औषध तस्करी रोक्ने प्रयास हरेक कोणबाट असफल बन्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण व्युरोले लागू औषधको ओसार पसार रोक्न ठूलै कसरत गर्दै आएपनि लागूऔषध प्रयोगकर्ता र ओसारपसारकर्ताको करामतको अघि केही लाग्न नसकेको अवस्था देखिएको छ ।
‘चोरका हजार उपाय’ भने झै प्रहरीको हरेक प्रयास असफल हुँदा नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको तर भारतमा खुलेआम विक्री हुँदै आएको औषधिजन्य लागू औषध सहजै नेपाल प्रवेश हुँदै आएको छ ।
प्रहरीले आफ्नो मात्र नभइ सबैको सक्रियता आवश्यक देख्न थालिसकेको छ लागूऔषध ओसारपसारको नियन्त्रणतमा । हुन पनि समाज र मुलुकका लागि नै घात मानिएको लागूऔषध प्रयोगको गतिविधि रोक्न आम जनमानस पनि सजग र सक्रिय बन्न आवश्यक छ नै ।
२. प्रतिष्ठित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चोरीका कारण बन्यो बदनाम
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालको लागि मात्र नभइ दक्षिण एसियाका लागि नै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हो । धेरै रोगको निदान हुने विश्वासले हरेक दिन यहाँ विरामीहरुको ठूलो भीड लाग्ने गर्दछ ।
तर, लाजमर्दो र बेइज्जतपूर्ण पाटो यहाँ चोरीको घटना नभएको दिन नै हुँदैन । प्रतिष्ठानको इज्जतमा दाग लाग्ने गरी हुँदै आएको यो घटना नत न्यूनीकरण हुन नसकेको छ नत यस्का लागि कुनै उपायको नै खोजी गर्ने कार्य भएको छ ।
विरामीको पैसा, मोबाइल चोरी हुने कुनै अनौठो नमानिने यहाँ अब हरेक दिन जसो मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको छ । विरामी, विरामीका आफ्न्तको मात्र नभइ स्वयं चिकित्सकहरुका नै मोटरसाइकल, स्कुटर चोरी हुन थालेपछि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठन थालेको छ ।
विरामीका आफ्न्तहरुको प्रतिष्ठान परिसरभित्रको पार्किङका नै राखेको मोटरसाइकल हराएपछि उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
के प्रतिष्ठानले चोरीको घटना रोक्न कुनै चासो नै नदेखाएको हो त ? यो प्रश्नको जवाफ प्रतिष्ठानले अब दिनै पर्ने भएको छ ।
३. पानीको अभावमा काकाकुल बनाइएका ओखलढुंगा सदरमुकामवासीको आँत बल्ल भिज्यो
खानेपानीको समस्याले नपिरोलेको शहर छैन यो देशमा । काकाकुल बनेका गाउँहरुको संख्या पनि कम छैन यो मुलुकमा । जलस्रोत धनी मुलुकका नागरिकको यो नियति चर्कदो छ ।
समस्याका समाधानका लागि भए गरेका पहलहरु पनि कम नै छन् । बिभिन्न प्रविधिको प्रयोगबाट खानेपानीको समस्या हटाउँदै लैजाने क्रममा ओखलढुंगा सदरमुकामले पनि यो अवसर बल्ल पाएको छ ।
७ करोड ७८ लाख रुपैयाँको लागतमा संघीय सरकार र स्थानीय उपभोक्ताको सहलगानीमा १२ किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याएर सदरमुकामवासीलाई पिलाउने कार्य आरम्भ गरिएको छ ।
जसको कारण सदरमुकामका ९ सय घरधुरीका वासिन्दा लाभान्वित भएका छन् ।